Global Voices teny Malagasy » Netizen Report: Votsotra teo Ampelatànan’ny Governemanta Ny Drafitra TPP, Ka Tonga Any Amin’ny WikiLeaks · Global Voices teny Malagasy » Print
Netizen Report: Votsotra teo Ampelatànan'ny Governemanta Ny Drafitra TPP, Ka Tonga Any Amin'ny WikiLeaks
Voadika ny 15 Desambra 2013 23:05 GMT 1	 · Mpanoratra Netizen Report Team Nandika miora
Sokajy: Mediam-bahoaka, Tatitry ny Mpiserasera, GV Mpisolovava
Sarintany avy amin'ny Electronic Frontier Foundation (CC BY)
Nandray anjara tanatin'ity tatitra ity i Hae-in Lim, Lisa Ferguson , Ellery Roberts Biddle , ary i Sarah Myers .
Manome sary iraisam-pirenena ahitana ireo fanamby, fandresena, ary fironana mipoitra mikasika ny zo ao anaty Aterineto maneran-tany ny Tatitry ny mpampiasa aterineto ato amin'ny Global Voices Advocacy. Manomboka ao anaty Aterineto ny tatitra amin'ity herinandro ity, izay namoahan'ny Wikileaks ny herinandro lasa teo ny tokon-drafitra  fifanarahana miafina eo amin'ireo firenena ao Pasifika (TPP) mikasika ireo zo fizakàmanana ara-tsaina. Hatramin'ny nanombohan'ireo fifanarahana TPP, tsy mbola naseho ny vahoaka ireo volavolan'io fifanarahana io. Ny ampahany lava indrindra ao anatin'io toko io, izay antsoina hoe “Fampiharana,” dia manoritsoritra ireo fepetran'ny politika  izay mety hanena  ny zon'olon-tsotra sy ny tsiambaratelo ao anaty aterineto, ary hamorona fanerena vaovao ho an'ireo mpanome tolotra Aterineto. Notanterahana ny 19-24 Novambra ny fihaonam-ben'ireo Lehiben'ny Fifampiresahana ao anatin'ny TPP, any Salt Lake City, Etazonia. Jereo ity sarimiaina ity , noforonin'ny Electronic Frontier Foundation, hahafantarana bebe kokoa mikasika ny TPP.
Fahalalahana Miteny: Manavotra ireo Votoaty Voasivana ao anatin'ny Sina weibo ny ProPublica
Ny herinandro lasa teo, namoaka fikarohana manan-danja naharitra dimy volana  mikasika ny sivana ao anatin'ny Sina Weibo, sehatry ny media sosialy malaza indrindra ao Shina, ny ProPublica. Ny tena votoatin'io fikarohana io dia ny rakitr'ireo sary voasivana sy lahatsoratra nalahatra araka ny sokajiny avy, isan'izany ny “fanivanana”, “raharaha manafintohina& kolikoly”, “lahateny politika”, ary “Bo Xilai” (mpanao politika noverezin-kasina).
Ny fikarohana vaovao avy ao amin'ny Citizen Lab dia maneho  ny fomba fanivananan'ilay rindrambaiko japoney LINE ireo mpampiasa azy ao Shina. Rehefa mametraka ny fireneny hoe Shina ireo mpampiasa, dia misintona lisitranà teny voasivana ilay rindrambaiko — tahaka ny Kianjan'ny Tiananmen sy ireo teny mifandray amin'ny Falun Gong — ary manakana izay hafatra ahitana azy ireo.
Mampahafantatra ireo mpiampiasa ny vohikala Kanadiana fijangajangana Ashley Madison, “Fohy ny andro iainana. Mijangajangà.” Nefa tsy miombon-kevitra amin'izany ny Manam-pahefana Fampitoboroboana ny Median'i Singapore. Nanome baiko ireo mpanome tolotra Aterineto ilay masoivoho hanakana io vohikala io noho ny “tsy firaharahiany mibaribary” ny “lanjan'ny fianakaviana” manitsakitsaka ny Lalàna Fampiharana ny Aterineto  ao Singapore.
Mediaites ao Bolgaria  dia milaza fa lasa mihamalaza ireo bilaogy fanomezam-baovao tsy ara-dalàna, tsy dia mivelatra taorian'ireo fandrindràna vaovao an'ireo fikambanan'ny media.
Mangataka famerana vaovao ny votoaty ao anaty aterineto  ny Departemanta Federaly ho Fampivelarana ny Islamika ao Malezia, anatinà ezaka hanakanana ireo “fanafihana ny Silamo” ao anaty aterineto.
Manome angona mikasika ny fanakanana rohy sy teny manan-danja ao anatin'ny vohikalan'ny Wikipedia Persiana ao Iran ny Fikarohana iray nataon'ny anjerimanontolo iray ao Pennsylvania .
Herisetra: mari-pankasitrahana amin'ny Fahalalahan'ny Fanaovana gazety (tsy misy fahalalahana) ho an'i Dieu Cay
Ny Vietnamiana mpitoraka bilaogy Nguyen Van Hai , izay manoratra amin'ny solonanarana Dieu Cay, dia miatrika  roa amby folo taona an-tranomaizina noho ny “fanaovany fampielezan-kevitra” manohitra ny fitondrana, araka ny voalaza. Homen'ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao gazety ny mari-pankasitrahana 2013 momba ny Fahalalahan'ny Fanaovana gazety Iraisam-pirenena i Hai amin'ny faraparan'ny volana Novambra, ary izy irery ihany no olona homena izany nefa tsy hanatrika ny lanonana.
Tsiambaratelo: Hiditra Aterineto ao Ekoatora? Itsikio ny kamerà
Ireo fanovana natolotra ho amin'ny Lalàna mikasika ny heloka bevava ao Ekoatora dia hitaky ny firaketan'ireo mpanome tolotra Aterineto rehetra ny hetsik'ireo mpampiasa Aterineto tanatin'ny enim-bolana fara-fahakeliny, ary mitaky ihany koa ny fametrahana kamerà amin'ireo trano fidirana aterineto hiraketana ireo mpanjifa. Mety hanitsakitsaka ny Lalàm-panorenan'ny firenena ireo fanovàna ireo ary hametraka fatiantoka ara-toekarena eo amin'ireo tomponà trano fidirana aterineto, izay mety hanena ny tahan'ny fidirana Aterineto ao Ekoatora izay efa ambany dia ambany.
Nanolotra vahaolana drafitra  antsoina hoe “Ny Zo hanana Tsiambaratelo anatin'ny Vanim-potoana Dizitaly” teo anoloan'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana i Alemana sy Brezila. Manohana io vahaolana io ny firaisan'ireo vondronà mpiaro ny zo dizitaly, nilaza fa mihazona ny fanamafisany ny tsiambaratelon'ny olon-tsotra ho zon'olombelona fototra sy fiarovana ankapobeny ireo angona avy amin'ny fifandraisana izany.
Hita  ao amin'ny vohikala buscardatos.com ny rakitry ny fifidianana manokana avy amin'ireo olom-pirenena Meksikana, izay araka ny hita dia nalaina avy ao amin'ny rakitry ny Ivontoeram-pifidianana Federaly Meksikana (IFE). Araka ny gazety Meksikana Reforma , ahitana ny tenimiafina sy ny toeram-ponenan'ireo mpifidy izany rakitra izany, ka mifanaraka amin'ny anarany avy. Nametraka fitarainana araka ny lalàna tany amin'ny biraon'ny LEhiben'nyFampanoavana sy ny Fitantan-draharaham-bahoaka Federaly Meksikana ny IFE.
Fizakàmanana: tsy misy olana ny Google Books
Nijoro  hanohana ny Google ny Fitsarana iray ao amin'ny Ditrikan'i New York tanatinà fiampangana nato an'ireo Google Books. Nahita ilay mpitsara fa tafalatsaka anatin'ny torolàlan'ny fampiasana ara-dalàna ny fiovàn'ny fampiasan'ny Google ireo boky manana fizakàmanana, manamarika fa  manome fitaovana mnkany aminny fanovàna ho an'ny fikarohana io tetikasa io ary manitatra ny fahafahana mahazo boky ho an'ireo mpampiasa Aterineto rehetra, tafiditra anatin'izany ny tsy fahazoana manonta ireo boky. Eny tokoa, manome ireo tolotra anatinà endrika mifanaraka amin'ny rindrambaiko manalehibe soratra, rindrambaiko ahazoana fàfana sady mamaky no miteny, ary ireo fitaovana Braille (ho an'ireo jamba), ny Google Books.
Fahafanam-pon'ny Mpampiasa Aterineto
Natao ny topimason'ny lahatsary fanadihadiana “The Internet’s Own Boy”- Ilay Zazalahin'ny Aterineto irery ihany . Io horonantsary io dia mitantara ny fiainan'i Aaron Swartz, mafana fo ao anaty Aterineto sy ireo antony mahonena manodidina ny fahafatesany aloha loatra.
Zavatra Mahaliana: hamidy ny finalcountdown.com!
Hanatanteraka lavanty ho an'izay sahy miakatra ambony indrindra ny Yahoo mandritra ny herinandro mba hivarotany vondron'anarana vohikala tsy ilainy intsony. Anivon'ireo anarana amidiny ireo ny finalcountdown.com sy ny sandwich.com. Manomboka amin'ny $1,000 ka hatramin'ny $1.5 million ireo sandan'ireo anarana ireo—antenaina fa nanangom-bola ianareo, ry mpankafy be olana.
Famoahana sy Fikarohana
Digital Footprints and Identities: Community Attitudinal Research Report —Manam-pahefana Misahana ny Fifandraisana sy ny Media Aostraliana
Measuring Internet Activity: A (Selective) Review of Methods and Metrics  —Foibe Berkman ho an'ny Aterineto sy ny Fiarahamonina
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/12/16/54779/
 namoahan'ny : http://boingboing.net/2013/11/13/wikileaks-publishes-the-inte.html
 fepetran'ny politika: http://keionline.org/node/1825
 ity sarimiaina ity: http://www.youtube.com/watch?v=p3KlrfjcjV4
 fikarohana manan-danja naharitra dimy volana: https://projects.propublica.org/weibo/
 Lalàna Fampiharana ny Aterineto: http://www.mda.gov.sg/Documents/PDF/Policies/PoliciesandContentGuidelines_Internet_InterneCodeOfPractice.pdf
 Mediaites ao Bolgaria: https://globalvoicesonline.org/2013/11/17/waiting-for-freedom-of-the-press-in-bulgaria/
 famerana vaovao ny votoaty ao anaty aterineto: http://news.malaysia.msn.com/tmi/censoring-the-internet-for-the-interests-of-the-few
 Fikarohana iray nataon'ny anjerimanontolo iray ao Pennsylvania: http://pandodaily.com/2013/11/12/state-of-censorship-how-iran-censors-the-internet-and-how-its-citizens-get-around-it/
 dia miatrika: http://cpj.org/2013/11/cpj-petition-calls-for-release-of-blogger-dieu-cay.php
 Ireo fanovana natolotra : https://www.accessnow.org/blog/2013/11/13/proposed-ecuadorean-criminal-code-poses-serious-threat-to-user-privacy
 Lalàna mikasika ny heloka bevava : https://docs.google.com/file/d/0B5cMEHQ2197-Z3FiRlR4Q2s4dWc/edit
 vahaolana drafitra: https://www.accessnow.org/blog/2013/11/01/brazil-germany-introduce-resolution-on-the-right-to-privacy-in-the-digital-
 fampiasana ara-dalàna : http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use
 manamarika fa: http://gigaom.com/2013/11/14/google-wins-book-scanning-case-judge-finds-fair-use-cites-many-benefits/
 “The Internet’s Own Boy”- Ilay Zazalahin'ny Aterineto irery ihany: http://mashable.com/2013/11/12/aaron-swartz-documentary-preview/#:eyJzIjoidCIsImkiOiJfZ3g5MzhpY28zNWJ5N25vMiJ9
 lavanty ho an'izay sahy miakatra ambony indrindra : http://www.cnbc.com/id/101195158
 Misoràta anarana ao amin'ny Netizen Report amin'ny alalan'ny mailaka: http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=NetizenReport